Kooxda Arsenal oo markale rag u soo daawada u dirsatay Nicolo Barella… (Meeqa milyan ayey doonaysaa inay ku soo qaadato?) – Gool FM
Kooxda Arsenal oo markale rag u soo daawada u dirsatay Nicolo Barella… (Meeqa milyan ayey doonaysaa inay ku soo qaadato?)
(London) 03 Apriil 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay weli ka go’an tahay in ay u dhaqaaqaan soo xero gelinta ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Cagliari, Nicolo Barella.
The Gunners ayaa la soo sheegayaa inay rag u soo daawada u dirsatay xiddiga xulka qaranka Talyaaniga isbuucyadii dhowaa, waxaana ay indhaha ku hayaan inay soo qaataan isaga si uu bedel ugu noqdo laacibkooda Aaron Ramsey oo ku biiraya Juventus.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Gunners ay markale xiddiga reer Talyaani u dirtay rag u soo daawada kulankii horyaalka Serie A oo ay kooxda Cagliari xalay la ciyaartay Juventus.
Barella ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inuu diyaaradda u saaran yahay kooxaha Napoli, AC Milan iyo Chelsea, waxaana la wariyey inay laacibkan doonayeen suuqii kala iibsiga xiddigaha ee bishii Janaayo.
Arsenal ayaa warbixinta lagu sheegay inay laacibkan khadka dhexe ee Nicolo Barella ku doonayso adduun dhan 43 milyan oo gini.
Heshiis kasta oo loogu talagalay Barella oo ay ka soo gudbiso Gunners ayaa laga yaabaa inuu ogolaado, maxaa yeelay waa uu doonayaa inuu Champions League ku ciyaaro garoonka Emirates xilli ciyaareedka soo aaddan.
“Mbappé wuxuu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo Real Madrid” – Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Arsenal